Fomba sy antony ho amin'ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena - Ny mpisolovava ao Shina. Shinoa rehetra ny mpisolovava an-tserasera.
Fomba sy antony ho amin'ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena
Ha izany ny olona rehetra dia manana ny antony manokana
Isan-taona ny isan'ny olona maniry ny hahazo ny zom-pirenena ny firenena dia ny fampitomboana ny fotoana maroHo mba handraisany ny fizakana ny pasipaoro rosiana, iray faniriana dia tsy ampy. Mba hahatakatra izay manana ny zo miantehitra amin'ny fitadiavana ny pasipaoro rosiana, dia ilaina ny mampihatra ny lalàna federaly 'Amin'ny maha-olom-Pirenena ao amin'ny Federasiona rosiana' ny. Zava-misy fa afaka mahita ny valin'ireo fanontaniana toy ny inona no antony fa ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena misy amin'izao fotoana izao. Efa-points dia voasoratra. Noho izany, ny pasipaoro Federasiona rosiana dia mety ho azo: Amin'ny ankapobeny, ireo fepetra ireo dia tena manjavozavo, noho izany dia mendrika ny nandavaka an-tsipiriany mba hahatakatra ity lohahevitra ity. Ny faha- lahatsoratra ity Lalàna Federaly mamaritra tamin'ny an-tsipiriany ny fomba handray ny zom-pirenena ny Federasiona rosiana tamin'ny ankapobeny antony.
Izany dia milaza fa isaky ny olon-dehibe ara-dalàna ny olona iray dia manana zo hanao izany izy ireo.
Afa-tsy raha izy: eo Amin'ny teboka farany misy mahaliana mahay manavaka.
Ny teny hoe toeram-ponenana azo nihena ho ny taona iray raha toa ny olona ny fampiharana ny maha-olom-pirenena dia: Ary ny olona sasany tsy mila na inona na inona ny fototry ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena avy amin'ny etsy ambony.
Mihatra amin'ny olona izay efa manokana fahamendrehan alohan'ny Rosia. Toy izany koa ny olom-pirenena dia milaza fa nampiasaina mba ho ampahany amin'ny firaisana sovietika, izay nanompo ho telo, fara fahakeliny, ny taona maro momba ny fifanarahana amin'ny rosiana Hery Mitam-piadiana na ny hafa sampana miaramila. Noho izany, ny ambony dia vetivety dia namaritra ny antony fahazoana ny rosiana olom-pirenena. Amin'ny teny baiko, ny zava-drehetra mijery bebe kokoa ny fanabeazana fototra sy fotsiny.
Mba mahatakatra ny fitsipika fototry ny dingana, dia mila fotsiny mba hamaky ny andininy faha- toy izany koa ny lalàna federaly.
Milaza mikasika ny sokajy ny olona izay manana ny zo hampihatra raha tsy misy fahazoana ny toeram-ponenana ny fahazoan-dalana sy tsy miaina ny takiana ny dimy taona. Noho izany, ireo vahiny izay: toe-javatra Ireo dia ny tsotra sy fahita indrindra. Telo antony mahazo ny zom-pirenena dia lehibe. Maro ny olona efa namoaka pasipaoro momba ireo teny ireo. Eny, izany tsy ny rehetra Misy antony hafa noho ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena ao amin'ny notsorina ny fomba. Ireo mpifindra monina dia afaka mangataka pasipaoro rosiana raha toa izy: Araka ny hitanao izao, ny fomba mahita ny Pasipaoro rosiana dia tsy kely izany. Ny olona izay tsy mendrika ihany no afaka foana hanararaotra ny hafa.
Mila antony tsara ho fahazoana ny rosiana olom-pirenena
Raha hampiasa vola vitsivitsy tapitrisa robla eo amin'ny fampandrosoana ny raharaham-barotra, fa tsy ny olona rehetra dia afaka, avy eo dia mahazo ny nitady-rehefa manokana sy ny asa ho azy nandritra ny taona maro dia tena tena. Ny sarotra indrindra ny sehatra mahakasika ny mamaritra toeram-ponenana vonjimaika fahazoan-dalana (RWP). Izany no dingana voalohany taorian'ny fahazoana ny"visa", izay dia tsy maintsy mandalo ny vahiny izay tsy manana preferential fototry ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena. Noho ny fisoratana anarana, na izany aza, saika mitovy ny antontan-taratasy ilaina. Ireto ny lisitra: matetika mitaky ny roa volana, miandry ny fanapahan-kevitra. Avy eo, fotoana fohy talohan'ny lany ny taona voalohany taorian'ny famoahana ny RWP, ny vahiny dia mila manome ny FMS miaraka amin'ny taratasy fanamarinana manamarina ny vola miditra. Noho izany, mihoatra noho izany dia nilaza fa ny antony sy ny fomba mba hahazoana zom-pirenena ny Federasiona rosiana dia voafaritry ny Lalàna Federaly. Amin ny fitsipika, misy fahafahana bebe kokoa mba ho lasa iray momba ny Rosia noho toa. Saingy tsy ny olona rehetra mifanitsy misy ny ambony sokajy. Maro ny olana ny fahazoan-dalana honina. Ary eto dia ny faribolana ny mpiadina mitondra ny lohateny hoe mba handray ity tahirin-kevitra: Tsara, ny mahay manavaka ny momba ny dingana savaranonando no voatanisa. Ary raha ny olona izay manana fototra ho fahazoana ny rosiana olom-pirenena rehetra ireo naka an-kaonty, dia afaka manomboka manangona tahirin-kevitra sy any amin'ny FMS ho an'ny famenoana ny fangatahana.
Eto dia inona no tokony ho fanomezana: Zava-dehibe ny manamarika fa ao amin'ny vahiny pasipaoro tsy maintsy misy hajia manamafy ny vahiny ny mandritra ny fotoana voafetra ny zo hiaina ao amin'ny faritany ao amin'ny Federasiona rosiana.
Panjakàna adikao ity pejy ity koa no takiana. Araka ny mety angamba, ny antony fanamoràna ny fahazoana ny zom-pirenena ny Federasiona rosiana, dia midika ny fanomezana ny mpifindra-monina tsy dia be dia be ny fonosana ny antontan-taratasy. Ary misy Ny lisitra ahitana afa-tsy olona fito zana-zavatra. Ireto ny zavatra tokony ho ankehitriny: Izany no tena lisitry ny fiarovana. Tsy isalasalana fa, arakaraka ny tranga manokana, dia ho replenished. Misy anarana telo antony fahazoana ny rosiana olom-pirenena sy hahazo maro kokoa ny lisitra mitovy ny isan'ny entana.
Mety misy ny taratasy fanamarinana momba ny fangatahana ny ny zom-pirenena ny URSS, ny tahirin-kevitra amin'ny ny kilema, ny diplaoma, ny taratasy momba ny asa, sns.
Na ahoana na ahoana, ny lisitra tokony ho voafaritra ao amin'ny fototry ny olona iray. Izany no fomba izay mamela ny olona hiverina amin'ny teo aloha dia very toerana misy ny olom-pirenena ao amin'ny Federasiona rosiana. Ny fitondran-tena azy, tokony mba hanolotra ny lisitra manaraka ity ny antontan-taratasy: Raha an-taratasy dia nangonina, dia ny reintegration dia ho entina avy hatrany. Amin'ny fomba izany, ny lalàna dia toy ny manohana araka izay azo atao. Raha toa ka ny vahiny izay manapa-kevitra ny hahazo maha-olom-pirenena rosiana manana zanaka, dia izy ireo ihany koa no manangona ny fonosana mitovy ny antontan-taratasy. Zaza efatra ambin'ny folo ny valo ambin'ny folo taona dia tsy maintsy manome ny fanekena voasoratra. Izany dia manamafy ny fahavononana sy manokana dia mahatsapa faniriana ny hahazo ny rosiana olom-pirenena. Raha toa ny ankizy iray tsy dia efatra ambin'ny folo taona, dia io fanekena dia feno roa ny ray aman-dreny. Ny ankizy rehefa manaiky fampiharana ny FMS ihany koa dia tokony ho ankehitriny. Ny hany miavaka dia ireo izay mbola tsy niditra ny saina taona.
Betsaka kokoa ny mahay manavaka ny mety ho nilaza momba ny fototra sy ny fomba noho ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena.
Tsy azo odian-tsy lazaina intsony ny fotoana. Fomba noho ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena sarotra sy lavitra.
Raha toa ka ny vahiny manaiky ny antontan-taratasy amin'ny ankapobeny antony, avy eo izy dia tsy maintsy hiandry hatramin'ny taona iray.
Noho izany, dia soso-kevitra mafy fa tsara hanangona ny antontan-taratasy ho an'ny famenoana.
Hisy ny fahadisoana - tsy maintsy manomboka manerana indray.
Raha ny olona iray dia mihatra ho an'ny notsorina ny toe-piainana, ny fe-potoana miandry ho eo amin'ny antsasaky ny iray taona. Mety ho lasa telo volana Fa raha ny mpifindra monina teratany mpandaha-teny amin'ny teny rosiana, ny olom-pirenena ao Belarosia, Kyrgyzstan sy i Kazakhstan na ny mpandray anjara ao amin'ny fampodiana azy ireo fandaharana.
Na ahoana na ahoana, ny olona dia ho nampahafantarina ny FMS fanapahan-kevitra ao anatin'ny telopolo andro manomboka amin'ny vaninandro ny famoahana izany.
Ankehitriny, izay rehetra fototry ny fahazoana ny rosiana olom-pirenena efa nianatra, azonao atao ny manondro Lahatsoratra No. Izany dia mamaritra ny toe-javatra izay mpifindra monina dia afaka ny ho ara-dalàna nandà ny fisoratana anarana ny pasipaoro rosiana. Noho izany, ny olona iray dia tokony tsy manantena ny hahazo ny rosiana olom-pirenena raha toa izy: Nivoaka avy rehetra voatanisa, dia azo atao ny fanjakana miaraka amin'ny fahatokiana fa ny antony tsy mety hahazo ny rosiana olom-pirenena no tena lehibe sy mazava ny heviny.
Trosa Famoriam-bola ny Fomba fiasa ao Shina
Proces Úpadku Základy - Soudy Spojených Států